सम्झना अतितको!!! – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७४ श्रावण २, सोमबार) ०६:०७
हरेक पटक हामी भेट्नु भन्दा पहिले उनी मलाइ फोन गर्थिन अनि भन्थिन “मलाइ के ल्याइ दिनु हुन्छ ?
म हाँस्दै जवाफ दिन्थे “सिंगै म आउदै छु त, अरु के चाहियो तिमिलाइ ?”
उनी जिद्दी गर्दै भन्थिन “चाहिन्छ के, हजुरले मात्र हुदैन। अरु कुरा पनि चाहिन्छ मलाइ
म सानो बच्चालाइ सोधे झै स्वर बनाएर उनलाइ सोध्थे के चाहिन्छ त मेलो सानूलाई के ल्याइ दिनु
उनी फुर्किदै भन्थिन चक्लेट ल्याइ दिनु है?”
म जिस्काउदै भन्थे “दुई रुपैयाकोले हुन्छ नि ?
केही समय पछि हाम्रो भेट हुन्थ्यो। उनी आफै मेरो गोजिमा हात हालेर “डेरी मिल्क” निकाल्थिन अनि अकिकती मलाइ खुवाइ दिदै फेरि आफू खादै मायालु स्वरमा भन्थिन ” हरेक पटक मलाइ भेट्दा हजुरको गोजिमा डेरि मिल्क हुन पर्छ है !
म मुस्कुराउदै भन्थे “हवस प्यारी, सधै लिएर आउंछु।
केही बर्ष पछि, एक दिन उनको र मेरो अनपेक्षित भेट भयो अस्पतालमा। उनको साथमा एउटा सानो बच्चा पनि थियो। सोचें बोलाउदिन भनेर तर सकिन आफुलाइ रोक्न। आफुलाइ सम्हालेर खुशी भएको अभिनय गर्दै नजिकै गएर सोधे “अरे, तिमी कसरी यहाँ ?
उनि मलाइ देखेर चकित भइन, अनुहार रातो बनाएर केहीबेर चुपचाप मेरो अनुहारमा हेरि रहिन। केहिबेर पछि सानो स्वरमा भनिन “माइत आएको थिए, छोरालाई ज्वरो आएर अस्पताल लिएर आएको।”
मैले उनको छोरालाइ हेर्दै भने “ओहो! तिम्रो त छोरा पनि ठूलो भै सकेछ । लगभग तिमि संग अनुहार मिल्दो रहेछ”।
(२०७४ श्रावण २, सोमबार) ०६:०७ मा प्रकाशित